Uthi uhlamukwe wumndeni 'ngokulaxaza' oFakazi uTshatha - Ilanga News
Home Izindaba Uthi uhlamukwe wumndeni ‘ngokulaxaza’ oFakazi uTshatha
Uthi uhlamukwe wumndeni ‘ngokulaxaza’ oFakazi uTshatha
Lo msakazi uthi usejikelwe ngisho nayizingane zakwabo
UTSHATHA uthi uselahlwe ngabakwabo ngokulaxaza oFakazi BakaJehova okuyibandla ‘lomndeni’ wakubo.
MTHOBISI SITHOLE noTHANDEKA NGOBESE
UTHI usejikelwe ngama-lungu omndeni wakhe umsakazi woKhozi FM, uKhathide “Tshatha” Ngobe (osesithombeni) ngokuhlubuka ebandleni loFakazi BakaJehova.
Lo msakazi uthi selokhu wamemezela ukushiya kwakhe eba-ndleni ngoba enganelisekile ngemfundiso yalo, usejikelwe wumndeni, akasakwazi ngisho nokuxhumana nezingane zakwabo ezingamalungu aleli bandla ngoba zingahambisani nesenzo sakhe.
Lo msakazi wahlubuka kuleli bandla ngoba ethi liguqula ngisho imibhalo ese-Bhayibhelini, lenze izincwadi ezinemibhalo evuna lona, bese zisatshala-liswa kuwona wonke amaga-tsha alo.
“Sengijikelwe ngisho nayi-zingane za-kwethu ezingamalungu aleli bandla, ezizalwa ngomama abazalana nomama, engikhule nazo ngoba umthetho webandla uthi, umhlubuki makanga-khulunyiswa ngisho nangamalungu omndeni wakhe.
“Konke lokhu kwenziwa kusetshenziswa
umbhalo ka-2 John 1:10 omayelana namahlubuka. Lo mbhalo uma uwufunda kusuka evesini lesi-7, uyathola ukuthi uzikhulumela ngabantu abaphika uKristu, hhayi abayizihlubuki, kodwa bona bawuguqula ukuze uvune bona kulokhu aba-kwenzayo, okwehlukanisa imindeni. Ngiyababonga mina oFakazi, ngingabhala incwadi igcwale mfi,” kusho uTshatha. Uveze ukuthi ngisho bonke abangani bakhe abesonta nabo kuleli bandla, kabasamkhulumisi.
Uthi ngo-2008 washonelwa ngunina, uNkz Thembi Dumisa (osesithombeni) ngenxa yokuthi wayeqinile okholweni lwebandla, okwenza wenqaba usizo lwezokwelashwa. Utshele ILANGA ukuthi kwakufanele athekelwe igazi nje-ngoba wayephethwe wumdlavuza walo, kodwa ngenxa yokuthi inkolo kayikuvumi lokho, kwagcina kumehlulile ukufa.
“Umama wenqaba ukuthekelwa ngegazi ngoba kuphambene nomthetho webandla, nangempela odokotela bahlanza ngedela ngoba yayingekho enye indlela ababe-ngamelapha ngayo.
“Washona emuva kwezinsuku ezimbili enqabe ukuthekelwa ngegazi.
“Kunezizathu-ke ezenza ukuba uNkulunkulu anqabele ama-Israel ukudla igazi lezilwane nokudla inyama yesilwane esingophanga, futhi uyasisho eBhayibhelini, kodwa inhlangano yoFakazi BakaJehova yawuguqula lowo mbhalo, yawusebenzisela ukunqa-bela amalungu ebandla ukuba athekelwe ngegazi ekubeni uJesu wabuza kubaFarisi ababehlulela mayelana neSabatha ukuthi ba-ngayiyeka yini imbongolo kama-khelwane wabo bangayikhiphi lapho ibhajwe khona, ngoba nje nakhu bethi yiSabatha.
“Lapha uJesu wayeveza ukuba-luleka komphefumulo nokuphila, ukuthi ngisho nokwesilwane kubalulekile, kodwa laphaya koFakazi BakaJehova okomuntu ukuphila akubalulekile, uyayekwa afe ngoba nje nakhu kungafanele athekelwe ngegazi,” kusho uTshatha.
Uthi ngokwenqubo yebandla, umuntu akavunyelwa ukulandela isiphiwo sakhe esizomnika udumo ezweni; kubalwa ukudlala ibhola nokucula.
Utshele ILANGA ukuthi nakuba uyasakaza nje, lokho wakwenza ngenkani kanti nokulingisa
emdlalweni iMbewu: The Seed wakuyekiswa yilona ibandla ngoba kuthiwa kuwudumo lwasezweni oluphazamisa ukholo.
ILANGA lizamile ukuthola uhlangothi lwebandla ngokuthinta u-Elder Christopher Gumede, u-Elder Cyril Mthembu no-Elder Mfundo Mngomezulu, abathe abakhulumeli ibandla, bazotholela leli phephandaba inombolo yomuntu ongaphawula kulolu daba, kodwa kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engathola-kali.
Previous articleUsebulewe owasinda ehlaselwa kwakhe
Next articleUthi akuthi diki ngokufela komkakhe ’emanyaleni’